Miinooyinka tuubooyinka iyo khadadka samayska duudduubku waxay sameeyaan lammaane dabiici ah. Sidaas oo kale samee khadadka duudduuban ee samaysyada iyo mishiinnada tuubada. Natiijada degdegga ah ee ka fiirsashada mowduucyadaan la yaqaan ee isku xigxiga waa isbeddel xooga la saarayo: oo lagu aadi doono tirada badan iyo noocyada kala duwan ee badeecadaha la rogay ee ku jira waardiyaasha qaab-dhismeedka adduunka iyo albaabka ...
Qalabka Birta ee qabow, Alaabta ceyriinka ah iyo Isbarbardhigga Range iyo Heerarka Wanaagsan
Qalabka birta ee qabow-samaysan, kaas oo ku jiri kara maaddada? Qalab bir ah oo qabow, kaas oo loo isticmaalo in lagu soo saaro bir-qabow-samaysan, oo ah nooc bir ah. Alaabta ceeriin ah, guud ahaan, biraha kulul ee la duubay ama qabow la duubay ayaa loo adeegsadaa biilasha, iyo qaloocinta iyo hawlgallo kale ayaa loo sameeyaa si loo helo co ...
Habka wax -soo -saarka mashiinka alxanka dhaadheer waa mid fudud, hufnaan wax -soo -saar sare, qiime jaban iyo horumar degdeg ah. Awoodda biibiilaha alwaaxa ee muquunku guud ahaan wuu ka sarreeyaa toobinta tooska ah ee lagu tolay, tuubada waxaa loo isticmaali karaa inay soo saarto tuubbo alxanka weyn oo leh meel bannaan oo cidhiidhi ah, laakiin ...